राजीनामा दिएका काफ्ले अझैं प्राधिकरणको प्रमुख ! – ToplineKhabar
काफ्लेको उक्साहटमा प्राधिकरणमा सन्कने डिएमडीहरु को–को हुन् ?
काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हाल प्रमुख कार्यकारी निर्देशक खाली छ । ऊर्जा मन्त्रालयले निमित्त कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीको रुपमा उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटलाई जिम्मा दिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख रहेका मुकेशराज काफ्लेलाई सरकारले हटाइसकेको छ । अझ भनौं काफ्लेले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । सरकारले नयाँ कार्यकारी निर्देशक चयनका लागि एक समिति समेत बनाइसकेको छ । तर, राजीनामा दिइसकेका काफ्लेले अझैं पनि प्राधिकरणको संरचना चलाइरहेको पाइएको छ ।
प्राधिकरणको प्रविधि शाखाले कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको पद तथा फोटो हटाएको थियो । तर, काफ्लेले दबाब दिएर आफू अझैं पनि कार्यकारी निर्देशक रहेको जनिने गरी आफ्नो फोटो र पदसहितको परिचय प्राधिकरणको बेवसाइटमा राख्न लगाएका छन् । प्रविधि शाखाका सञ्जय शर्मालाई काफ्लेले आफ्नो फोटो नराखे राम्रो नहुने भन्दै चेतावनी नै दिएको स्रोतको दावी छ ।
राजीनामा दिइसकेको काफ्लेको हर्कतका कारण प्राधिकरणमा अब कसले भनेको मान्ने र कसले भनेको नमान्ने अवस्था आएको प्राधिकरणका कर्मचारीले बताएका छन् । काफ्लेको ज्यादती बढेको भन्दै प्राधिकरणमा क्रियाशिल टे«ड यूनियनका प्रतिनिधिले विरोध जनाएका छन् । राजीनामा दिएका व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीले ऊर्जा मन्त्रालयमा समेत त्यसका बारेमा जानकारी गराइसकेका छन् । तर काफ्लेले दैनिक जसो नै दबाव दिने गरेको र आफ्नो काम गराउन लागेको बताइन्छ । प्राधिकरण नेपाल सरकारको निकाय हो । काफ्ले राजीनामा दिएका व्यक्ति हुन् । उनको हैसियत पूर्व भइसकेको छ । तर, उनले आफैं सर्वेस्सर्वा भएको भन्दै अझैं पनि प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनको ज्यादतीले हद नाघेको बताइन्छ ।
यस्तै सरकारले कार्यकारी निर्देशक छनौटका लागि एक समिति गठन गरेपछि काफ्लेले कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठनलाई उचालेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेका छन् । उनले कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रहेका जनार्दन भट्टराईलाई उचालेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न लागेको र नयाँ कार्यकारी निर्देशक चयन भएपछि प्राधिकरणका तालाबन्दी गर्ने सम्मको सोच बनाएको बताइन्छ । आजको जनआह्वान साप्ताहिकमा खबर छ ।
← वाशुलिङ् सुगर मिल चाँडै सञ्चालन हुन्छः सांसद राठौर
गोर्खा सैनिकले बेलायती बराबर पेन्सन नपाउने फैसला →
अब जहाजको प्राविधिक परीक्षण नेपालमै
November 13, 2016 toplinekhabar 0
केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै, भेन्टिलेटर र डिसि सक मेसिन तयारी अवस्थामा
May 10, 2017 प्रदीप भट्ट 0